တောင်သမန်သားလေး: Play Store မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေဒေါင်းလို့မရတဲ့ CoC အပါအ၀င် ဂိမ်းတွေ၊app တွေကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မလဲ ?
Play Store မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေဒေါင်းလို့မရတဲ့ CoC အပါအ၀င် ဂိမ်းတွေ၊app တွေကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မလဲ ?
(၂) Hot Spot Shield နဲ့ VPN ကျော်မယ် Hot Spot Shield အက်ပလီကေးရှင်းကို install လုပ်ပြီးသွားရင်၊ ဖုန်းထဲကနေ အဲဒီ app ထဲ ၀င်လိုက်ပါ။
app ထိပ်ဆုံးမှာ Connect ဆိုတဲ့ ခလုတ်ပါရှိပြီး၊ အောက်ဘက်မှာ Add apps ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေး ပါရှိပါတယ်။